VaMutambara Vanodzingwa neMDC Yavaitungamira
Kukadzi 10, 2011
MDC diki inotungamirwa naVaWelshman Ncube, inoti yadzinga mubato iri mutevedzeri wemutungamiri wehurumende, Va Arthur Mutambara, zvichitevera gakava riri mubato iri pamusoro pechinzvimbo china VaMutambara muhurumende.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wekomiti huru yebato ravo yeNational Council, munyori mukuru mubato iri, Amai Priscilla Misihairambwi Mushonga, vati VaMutambara havasisiri nhengo yebato ravo kutanga izvozvi, sezvo vadzingwa mubato.
Amai Mushonga vati VaNcube havasisina hany’a nekugadzwa semutevedzeri wemutungamiri wehurumende zvichitevera kuramba kwavati kwakaitwa nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, kuti VaNcube vatsive VaMutambara pachinzvimbo chavo muhurumende.
Amai Mushonga vati bato ravo rabudawo nechisungo chekuti chibvumirano chezvematongerwo enyika cheGlobal Political Agreement chivandudzwe kuitira kuti mumwe wemutevedzeri wemutungamiri wehurumende, abve kubato re Zanu PF sezvo vachiti vapa Zanu PF VaMutambara pachena kuti vave nhengo yebato iri.
Asi VaMutambara vanoti ndivo mutungamiri webato iri sezvo vachiti VaNcube havana kusarudzwa zviri pachena. VaMutambara vakazivisawo neChitatu kuti vadzinga VaNcube mubato.
Asi VaNcube vari kuramba vakatsika madziro vachiti vakasarudzwa zvine tsarukano uye havangadzingwe mubato nemunhu asina chinzvimbo mubato.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaMsekiwa Makwanya, vanoti VaMutambara havana chavakatadza nekuti nyaya iyi ichiri kumatare.
Asi mutungamiri weMDC-99, VaJob Sikhala, vanoti VaMutambara vanofanira kusiya chigaro ichi sezvo vari mubvakure.